Daafaca Man City ee Aymeric Laporte oo hoos u dhigay xiisaha uga imaanaya Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona – Gool FM
(Manchester) 25 Mar 2020. Daafaca kooxda kubadda cagta Manchester City ee Aymeric Laporte ayaa hoos u dhigay xiisaha uga imaanaya kooxaha reer Spain ee Real Madrid iyo Barcelona.
Aymeric Laporte ayaa soo jeediyey inuu ku faraxsan yahay kooxdiisa Sky Blues, xilli la soo warinayey inay xiiso uga imaanayaan Real Madrid iyo Barcelona.
25-sano jirkaan ayaa iskiis u noqday mid ka mid ah daafacyada sida aadka ah loo qiimeeyo kubada cagta adduunka tan iyo markii uu ku soo biiray Man City sanadkii 2018, sumcaddiisa ayaa si la taaban karo u kordhay xilli ciyaareedkaan, iyadoo lagu sharfayo in muddadii uu dhaawaca ku maqnaa ay dartiis u dhibtootay Man City.
Sida wax u socdaan Kooxda Tababare Pep Guardiola ayaa laga mamnuucay inay u tartamaan Champions League labada xilli ciyaareed ee soo socda, laakiin Laporte ayaa hoos u dhigay soo jeedinta ah inuu u ekaan karo inuu ka tago kooxdiisa haddii kooxaha reer Spain ee Barca iyo Real ay albaabka soo garaacaan.
“Anigu aad ayaan ugu faraxsanahay Manchester City, anigu waxaan ku raaxaysanayaa kubadda cagta halkaan.” ayuu u sheegay Laporte warsidaha El Chiringuito.
“Waxaan halkaan ku qabanaynaa waxyaabo wanaagsan, labadii sano ee la soo dhaafayna waxaan ku guuleysannay siddeed koob. ” ayuu hadalkiisa ku daray daafaca Man City.